Mareykanka oo diyaaradaha musqulaha la gali la’yahay cabsi awgeed Video+Sawiro – SBC
Mareykanka oo diyaaradaha musqulaha la gali la’yahay cabsi awgeed Video+Sawiro
Iyadoo dalka Mareykanka laga xusayo 10 sano guuradii ka soo wareegtey weeraradii 9/11 ee lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga aduunka, isla markaana lagu weeraray xarunta gaashandhiga Mareykanka ee The Pentagon-ka, taasi oo ah mid ka go’i la’a laabta & quluubta dadka Mareykanka ayaa waxaa 10 sano ka dib wali taagan cabsidii ka dhalatey jugtii weeraradaasi.
Xuska sanadkan wuxuu ku soo aaday xaalad adag oo anfiriir & walwal xambaaran waxaana la helay warar dhanka sirdoonka oo sheegaya in ay dhici karaan weeraro qaraxyo oo lagu soo beegayo 10 sano guuradii weeraradii 9/11, iyadoo sidoo kale ay ku soo aadayaan afar bil ka dib dilkii Mareykanku u geysteen Hogaamiyihii Shabakada Al-Qaacida Cusama Bin Ladin, kaasi oo lagu eedeeyey in uu yahay maskaxda ka dambeysa weeraradaasi.
Aaga loo yaqaan ground Zero ee magaalada New York oo ah halkii laga burburiyey daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga aduunka xus lagu qabtey oo loogu baroor diiqey dadkii sadexda kun ku dhawaa ee weeraradaasi ku dhintey waxaa ka soo qayb galey Madaxweyne Barack Obama, George Bush oo ahaa ninkii xilka madaxweynaha hayey xiligii uu dhacayey weerarkaasi & kii ka sii horeeyey Bil Clinton.
Amaanka ayaa aad loo adkeeyey waxaana halkaasi la dhigay boqolaal ciidamo ah iyo kuwa dhar cadka ah iyadoo laga cabsi qabey in weeraro dhacaan.
Madaxweyne Obama markii uu khudbada ka jeedinayey goobtaasi waxaa la dhexgaliyey muraadaha xabadu aanay karin si hadii la damco in la dilo ay uga difaacaan xabadaha.
Hadaba sheekooyinka kale ee qosolka leh ayaa ah in diyaaradaha rakaabka mudooyinkan cabsi xoogani ay ka jirto iyadoo qofkii ku laalaabta suuliga ama musqulaha diyaarada shaki laga qaado sida ka dhacdey mid ka mid ah diyaaradaha shirkada diyaaradaha American Airlines (AA).
Laba diyaaradaha dagaalka ah gaar ahaan F-16 ayaa durbaba baalasha ka galey oo soo galbiyey diyaarad shaki laga qaaday oo hawada ku jirtey ka dib markii laba qof oo lagu sheegay inay ahaayeen lamaane ay ku soo daaheen musqusha diyaarada.
Diyaarada oo ka soo ambabaxay magaalada Denver ee gobolka Colorado ayaa waxaa la sheegay iyadoo hawada ku jirta in laba qof ay isku soo xireen musqusha diyaarada taasi oo wal wal & cabsi xoogan ku abuurtey shaqaalihii & rakaabkii diyaaradaasi oo tiradoodu dhameyd 116 qof.
Telefishinka ABC ee fadhigiisu yahay wadanka Mareykanka ayaa sheegay in sadex qof ay ciidamada Booliisku xireen markii diyaaradu caga dhigatey halkii ay ku socotey, iyadoo afhayeen u hadley ciidamada Booliiska oo lagu magacaabo Peter Kowalchuck uu sheegay in shaqaalaha diyaarada ay ku soo wargaliyeen laba qof oo waqti aan caadi aheyn ku jirey mid ka mid ah musqulaha diyaarada.
Nin ka mid ah rakaabka oo lagu magacaabo Marilyn Kietrich, ayaa u sheegay Tv-ga Fox2 in hal qof uu galey musqusha ka dibna qof kale uu ka daba galey kuwaasi oo halkaasi ku jirey mudo dheer.
Tani waxay sidoo kale ka dhacdey diyaarad kale oo ay leedahay shirkada American Airlines oo ku jirtey duulimaad u dhaxeeyey magaalooyinka Los Angeles & New York.
Magaalada New York waxay ku jirtaa heegankii amaan ee ugu sareeyey tanina waxay ka dambeysay ka dib markii la helay warar dhanka sirdoonka oo xaqiijinya qorsheynta weeraro loo adeegsanayo baabuur laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa oo la doonayo in lagu beegsado xuska 9/11.
Halkan Link Video hoose ka daawo warbixin muqaal oo ka hadlaysa cabsida ka taagan Mareykanka.